Akụkọ - Efere Efere Na-eje ozi
Board na-eje ozi
Bọọdụ cheese & Ntọala mma
Ihe ndozi ụlọ
Ihe ndozi oge
Nri na-atọ ụtọ
Efere Efere Na-eje ozi
Okpokoro okpokoro Slate nwere uru abụọ dị iche iche ma e jiri ya tụnyere nke a na-ahụkarị:
Nke mbụ, ha na-esi ike megide scratches na nke abụọ, ọ dị mfe ịtọhapụ ha na ntụpọ niile.
Efere Slate ọ bụghị nanị na-adọrọ mmasị na atụmatụ ha dị ukwuu ma na-adọrọ adọrọ, kamakwa site na ụdị ọrụ ha dị iche iche. Enwere ike iji ha dị ka ndị na-edozi tebụl maka ntọala tebụl, dị ka efere efere maka efere ndị mara mma, dị ka mbadamba nkume ma ọ bụ dị ka ihe mkpuchi ifuru na ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
Ma dị ka ebe a na-achọ mma nke ị nwere ike igosi ntọala ebe mara mma gị ma ọ bụ ịtụ nri ozugbo, na ebe nchekwa slate ị ga-enwe ike ịmasị onye ọ bụla.
Sitekwa n'echiche gburugburu ebe obibi, mbadamba slate bụ nhọrọ dị oke mma, slate bụ nkume nkịtị nke na-ekwesịghị ịmepụta dị ka ihe ndị ọzọ.
Àgwà ndị a niile na-eme ka slate placemat setịpụrụ ọ bụghị nanị na ọ bụ ezigbo ihe na-adọrọ adọrọ, ma ọ pụkwara ịkara na arụmụka gburugburu ebe obibi na nke bara uru.
Bọọdụ ndị mara mma nwere ụdị aka nke slate eke na-egosi ihu gbajiri agbaji pụrụ iche, na-enye ntọala ụwa maka chiiz, charcuterie ma ọ bụ nri nri. Jiri nzu dee ozugbo na bọọdụ chiiz slate iji kpọọ nhọrọ ndị egosipụtara; naanị iji akwa mmiri hichaa ọcha. Nkwado mmetụta uche na-echebe tebụl.
bọọdụ ije ozi rustic Style Slate - 100% ejiri aka mee site na Natural Stone Slate, elu mara mma ga-eme ka tebụl iri nri gị bụrụ ihe pụrụ iche. Ụzọ dị mma iji nye cheese, dessert na appetizers. Zuru oke maka ntụrụndụ, ije ozi, ịchọ mma na ihe ndị ọzọ.
Mere site High Quality Natural Slate. bọọdụ slate ọ bụla pụrụ iche nwere akụkụ chipped. Ekpuchiri na mmanụ ịnweta mmanụ iji wepụta ịma mma eke!
N'ihi ihe slate eke, ọ na-esighi ike na ihe dị nkọ (mma, ndụdụ, wdg) nwere ike ịcha elu ya. Ọ BỤGHỊ ngwa ndakwa nri, igwe efere, oven na stovutop nchekwa. Naanị nsacha aka.
Oge nzipu: Jul-05-2021
Ogige mmepụta ihe, Lushan City, Jiujiang, Jiangxi, China